Home Wararka Cabdirishiid Xiddig oo qaatay shahaadada musharaxnimada.
Cabdirishiid Xiddig oo qaatay shahaadada musharaxnimada.
Xildhibaan Cabdirishiid Maxamed Xiddig ayaa qaatay shahaadada musharaxnimada kursiga tirsigiisu yahay 072 oo uu horey ugu fadhiyay.
Kursigan ayuu ka jirey tartan adag, waxaana horey u shaaciyay in uu u tartamayo la taliyaha doorashooyinka ee madaxweyne Farmaajo Cabdi Cali Raage, oo sidoo kale horey la taliye u ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Cabdirishiid Xidig oo horey mar ugu tartamay kursiga guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa mar hore warbaahinta ka sheegay in kursiga xildhibaanimada uu kula loolamayo madaxweyne Farmaajo, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Previous articleQoor Qoor oo ku guuleystay in uu heshiisiiyo Fahad & C/raxman Cabdishakur
Next articleMaxay tahay sababta Guddiga Doorashada Federaalka u diideen xubinimada Fahad Yasin?
MW Xasan Sheekh oo ka hadlay markii 3 aad oo...